Eyothusayo/ekude iMuskoka Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJackie
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uJackie iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Intle kakhulu, isanda kulungiswa igumbi lokulala eli-3 kwiLake Cecebe, imizuzu engama-20 emifutshane ukusuka edolophini yaseBurks Falls. Igumbi lokuhlala elivulekileyo lokuhlala kunye negumbi lokutyela elinesilingi ezivalekileyo, ikhitshi esebenza ngokupheleleyo ukuze ukonwabisa ngokulula. Ipropathi yabucala kakhulu, idesika enkulu enembono entle yechibi kwiikhilomitha ezingama-40 zeendlela zamanzi ezidityanisiweyo. Ukuloba okugqwesileyo kunye nokuqubha, i-BBQ, umgodi womlilo wangaphandle, kunye nendawo evulekileyo yokusebenza.
Urhulumente ukhuphe i-ID kunye ne-1,000.00 yediphozithi yomonakalo, i-$ 350 / ubusuku (ubuncinane be-3 ubusuku)
WATERFRONT - UMBONO OMHLE - AMAVA E-MUSKOKA OYINYANISO - AHLAZIYWA NGOKUPHELELEYO - ELITE STERILIZATION CREW OCOCA - IZIKO ELITSHA LEPROPANE - IZITOILETO EZIGUSHAYO KUNYE NAMANZI ABAQHELEKILEYO - UKUQESHWA KWESIBHEBHANA - INDLELA ENDODA EMDALA YOKUCOCA -UKUNCINCA OKUBUYISA INDLELA YOKUCINGA 5.
Ukuzola, akukho xinzelelo, kunye nekhaya elisecaleni kwechibi elikhethekileyo ekupheleni kwe-de-sac ejikelezwe yimithi evuthiweyo, yendalo kunye nokuzola kwiholide efanelekileyo yeholide. Imizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya kwindawo enomtsalane, ekufuneka uyibone iintloko eziScreaming, umboniso wangaphandle waseMidlothian Castle oquka imifanekiso eqingqiweyo enkulu eyenziwe ngekhonkrithi kwipropati yeehektare ezingama-310.
HIGH POWERED DISINFECTANT INBETWEEN GUEST - CLEANING TEAM ALSO DISINFECTS
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$391
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Burk's Falls